Fitness • Health News Nepal
मोटोपन किन बढ्छ ? यो प्रश्न भन्दा पनि अर्को प्रश्नले हामीलाई बढी सताइरहेको छ । मोटोपन कसरी घटाउने ? जबकी...
अहिले रुघाखोकी लाग्नसाथ मान्छेमा डर पैदा हुन्छ । उनीहरु आफैमाथि शंका गर्न थाल्छन्, ‘कतै कोरोना त लागेन ?’ कोरोनाको सुरुवाती...